Isinxibo sikaGwen Stefani sikaPinki oShushu oPinki ujongeka esiqhelekileyo ngesizathu - Indumasi
Eyona Indumasi UGwen Stefani uphinde wanxiba ingubo yakhe yomtshato kwaye akukho mntu ubonileyo
UGwen Stefani ngo-2002 eSt Paul’s Cathedral eCovent Garden eLondon, eNgilani.UJames Whatling / UK Cinezela nge-Getty Izithombe
Ngaphambi kokuba i-ombre ibe ngumbala weenwele, uGwen Stefani wazisa uninzi uphawu Ukujonga konke.
Kwiminyaka yakhe yokuNgathandabuzeki, kwakudala ngaphambi kobudlelwane bakhe obuphezulu kunye Abantu ’ s Sexiest Man Alive, (okwaziwa njenge crooner yelizwe uBlake Shelton), wayeyintombazana nje etshata noGavin Rossdale, u-'90s alt-rock bro wamaphupha akhe. Ukukhumbula eso siganeko sibalulekileyo, wanxiba ingubo yomtshato efudumeleyo epinki.
Abantu basamdumisa uNdikhoyo 2002 jonga , nangona esi sibini siqhawule umtshato kwi-2016 (#tbt kwi Ihlobo lomongikazi ).
UStefani uyaphawuleka kwi-90's yakhe nefuthe isitayile, kubandakanya umlomo wakhe obomvu. Kodwa ngandlela thile, ukhetho lwakhe lokuphinda enze ilokhwe yakhe yomtshato ngelixa ekhuthaza ialbham yesine ye studio, Uyenza ukuba uzive ngathi yiKrisimesi, wabhabha phantsi kwe-radar.
Ayikabi yiKrisimesi kodwa @gwenstefani Sele ebhiyoza ngengoma entsha, ejongeka kamnandi kwisinxibo sikaSiriano ombré! pic.twitter.com/sL7blbL9j5
-UmKristu uSiano (@CSiriano) NgoSeptemba 22, 2017
Emuva ngo-Septemba, uStefani wabanjwa ejikeleza umthi weKrisimesi ngengubo epinki emhlophe eyayibonakala iqhelekile kuye nakubani na owayekhumbula umtshato wakhe wango-2002. Kodwa ngeli xesha, kwakungekho mtshato, nangona enamahemuhemu okusondela kuye ukubandakanyeka kunye noShelton.
Imvelaphi yayiyidayi edayiweyo kunye nepeyinti yesandla, eyilwe nguJohn Galliano weChristian Dior. Iqela lakhe lesibini le-ombre yayiyinguqulelo ehlaziyiweyo eyenziwe ngumyili wodumo uChristian Siriano, owayesandula ukubonakaliswa kwi IXESHA 100 .
Iprojekthi yokubaleka I-alum kunye nomyili weenkwenkwezi ngumlandeli wexesha elide wengubo kaStefani. Wayeyithanda kakhulu kangangokuba wayihlonela ingqokelela yakhe yomtshato Intsimi encinci , i-boutique yomtshato yenziwa yaziwa Yithi Ewe kwilokhwe .
Ndiyithandile indlela eyayiyi-ombre, kwaye ndacinga ukuba intle ngenene, uxelele Molo! Ngo-2016.
Ngokujija, uStefani wagqiba ekukhetheni ukuzonwabisa ngenkangeleko yakhe yokuqala yomtshakazi kwi-albhamu yakhe.
Oukumkani weIngubo endiyenzileyo ibivela kwingqokelela yethu yomtshato, uSiriano uqinisekisile kuMbonisi. UGwen Stefani kwisinxibo sakhe sodumo lwe-ombre okokuqala ngeenxa zonke.UThomas Rabsch / WireImage
Ndicinga ukuba yinguqulelo entsha ehlaziyiweyo kuye, ucacisile. Yayingakhelwanga ngokukodwa le albhamu, kodwa yayilingana kanye kwaye yayibonakala ngathi iyindlovukazi!
Ke, uStefani wagqiba ukunxiba iimpahla eziphefumlelwe ngumfanekiso oyinyani wefashoni-ngokwakhe.
Siyathemba kuphela ukuba uyakuphinda ukujonga okwakhe kutshanje Ukuhlala eLas Vegas . Okanye mhlawumbi uya kubopha iqhina kwakhona kwisambatho se-ombre, ngeli xesha kwilizwe lakhe elihle. Umtshato wakhe noRossdale usenokuba ngowethutyana, kodwa phantsi kwayo yonke loo nto, ukuthanda kwakhe u-ombre kuhlala ngonaphakade.
Uqhawulo-mtshato Uqhawulo mtshato: UMelissa Schiff Soros uhlawula ngokukhawuleza ukuba yi-Ex $ 10M yeW. 11th Townhouse
I-Iowa ayisebenzi - Ngaphandle kokuba uRomney ayiphumelele
Umntu omtsha uZachary Spicer uyakhanya njengoMbingeleli Ongathandabuzekiyo kwi ‘The Good Catholic’
'I-Flash' Ixesha lesithathu le-Premiere Recap: Ukuphuka kweNqaku
dunkirk kwibhokisi yeofisi mojo
izongezo ezikhuselekileyo zokunciphisa umzimba
leliphi ixesha lokungabi nazintloni kwi-tv
I-411 yokubuyisela umva kwifowuni usa